Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » ICanada iyakwalela konke ukuhamba ngenqwelomoya kwabahambi abavela eMorocco
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba eziNqabileyo eMorocco • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ngokusekwe kwingcebiso yezempilo kawonke-wonke yakutshanje evela kwi-Arhente yezeMpilo kaRhulumente yaseKhanada, iThutho Canada ikhupha iSaziso esiya ku-Airmen esithintela zonke iinqwelo-moya zabakhweli nezabucala eziya eCanada zisuka eMorocco ukusukela nge-29 Agasti 2021 ukuya nge-29 Septemba 2021.
Ezothutho Canada zithintela zonke iinqwelomoya ezithe ngqo kunye nezabucala zokukhwela abantu eCanada zisuka eMorocco.
Ukuvalwa kwenqwelomoya eMorocco kusebenza ukusuka nge-29 ka-Agasti ukuya nge-29 kaSeptemba.
Abantu baseCanada bayacetyiswa ukuba baphephe nakuphi na ukuhamba okungabalulekanga ngaphandle kweCanada
I-Canada inenye yeendlela ezingqongqo zokuhamba kunye nemida emhlabeni, kwaye ibeka phambili impilo kunye nokhuseleko lwabantu baseKhanada ngokuqhubeka nokuthatha umngcipheko osekwe kumngcipheko kunye nendlela yokulinganisa yokuvula kwakhona imida yayo.
Njengazo zonke izinto zempendulo ye-COVID-19 yaseCanada, amanyathelo emida asekwe kwidatha ekhoyo, ubungqina besayensi kunye nokubeka iliso kwimeko yesifo eCanada nakwamanye amazwe. Ukonyuka kweziphumo zovavanyo ezilungileyo ze-COVID-19 kuye kwaqwalaselwa kubahambi abafika eCanada bevela eMorocco kwinyanga ephelileyo.
Ngokusekwe kwingcebiso yezempilo yoluntu yakutshanje evela kwi-Arhente yezeMpilo kaRhulumente yaseCanada, Ezothutho Canadkukhutshwa iSaziso esiya kwi-Airmen (i-NOTAM) ethintela zonke iinqwelo-moya zabakhweli nezabucala eziya eCanada zisuka Morokho ukusuka ngo-Agasti 29, 2021, ngo-00: 01 EDT kude kube ngu-Septemba 29, 2021, ngo-00: 00 EDT. Zonke iinqwelomoya zokuhamba kunye nezabucala zabakhweli eziya eCanada zisuka eMorocco ziphantsi kwe-NOTAM. Ukusebenza kwemithwalo kuphela, ukuhanjiswa kwezonyango okanye iinqwelomoya zomkhosi azifakwanga.
Ukuqinisekisa ukhuseleko kwezokuhamba ngenqwelomoya kunye nokunciphisa ukuphazamiseka kokusebenza, iinqwelomoya ezisuka eMorocco esele zihamba ngexesha lokupapashwa kwe-NOTAM ziya kuvunyelwa ukuba ziye eCanada. Njengenyathelo lethutyana, de i-NOTAM iqale ukusebenza, bonke abahambi abafika kwezo nqwelo moya baya kucelwa ukuba bathathe uvavanyo xa befika eCanada.
Ezothutho zaseKhanada zikwahlengahlengisa uMyalelo weThutyana wokuHlonipha iimfuno ezithile zokuHamba kwabaNtu ngenxa ye-COVID-19, enxulumene nelizwe lesithathu langaphambi kokuhamba kovavanyo lweemolekyuli zelizwe lesithathu ukubandakanya abahambi baseCanada bevela eMorocco ngendlela engathanga ngqo. Oku kuthetha ukuba abakhweli abasuka eMorocco besiya eCanada, ngendlela engathanga ngqo, baya kucelwa ukuba bafumane uvavanyo olusebenzayo lwangaphambi kokuhamba kwilizwe le-19- ngaphandle kweMorocco - ngaphambi kokuqhubeka nohambo lwabo oluya eCanada. Imfuno yokuvavanywa kwelizwe lesithathu nayo iya kuqala ukusebenza nge-19 ka-Agasti 29, 2021, ngo-00: 01 EDT.
ICanada iyaqhubeka nokubeka iliso ngokusondeleyo kule meko, kwaye izakusebenza ngokusondeleyo noRhulumente waseMorocco kunye nabaqhubi beenqwelo moya ukuqinisekisa ukuba iinkqubo ezifanelekileyo zibekiwe ukwenzela ukuba kuqaliswe ngokukhuselekileyo ukuhamba ngenqwelomoya ngokuthe ngqo xa iimeko zivuma.
Ukuthintela iinqwelomoya ezivela kumazwe axhalabisayo yinxalenye yendlela yaseCanada kulawulo olululo kunye nolusebenzayo lwesicwangciso sokuvula umda kwakhona eCanada.
Abantu baseKhanada bayacetyiswa ukuba baphephe uhambo olungabalulekanga ngaphandle kweCanada- ukhenketho lwamanye amazwe lwonyusa umngcipheko wokuchaphazeleka, kunye nokusasazeka kwe-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo. Amanyathelo emida ahlala ehlala ekutshintsheni njengoko imeko yesifo iguquka.